Egypta: Voina nitranga ao Doweiqa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2018 19:11 GMT
(Marihina fa tamin'ny 8 Septambra 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nanoratra momba ny loza nitranga tao Doweiqa izay nahafatesan'olona maherin'ny 30 noho ny fianjeran'ny vatolampy ny bilaogera Egyptiana. Azo natao ve ny nisoroka ity loza ity? Ary nahoana no ireo olona fadiranovana indrindra hatrany no tratran'izany?
Nanoratra momba ny loza eto i Zeinobia :
Adinoy aloha ny momba ny tantara Ramadany ao amin'ny fahitalavitra sy ny “Hisham sy Susan“, fa zava-dehibe noho izany no nitranga…
Androany, nifoha tamin'ny loza nahatsiravina i Egypta izay afaka nialana raha nisy ny fandraisana andraikitry ny fitondrana tamin'ny fametrahana ny fiarovana ny olom-pireneny tsy manavaka ny sata ara-tsosialy ho laharam-pahamehana.
Araka ny tati-baovao, manodidina ny 17 ny olona maty vokatry ny fianjeran'ny vatolampy tao an-tanànan'i Doweiqa ao Manshiyat Nasser, atsinanan'ny afovoan-tananan'i Kairo. Teo amin'ny Havoana Mokattam malaza no nitoeran'ity vatobe ity.
Nanapotika ny tranobe iray manontolo ny vatolampy goavambe araka ny hita tamin'ny lahatsary nampalahelo tao amin'ny Al Jazeera izay vao nalefa minitra vitsy izay .
Nilaza ny fantsom-baovao ofisialy, News Nile fa olona miisa 17 no maty, ary olona miisa 40 no nentina tany amin'ny hopitaly ary trano miisa 30 no simba. Nilaza ny Al Jazeera fa mbola misy olona tsy latsaka ny 500 no raikitra ao ambanin'ny trano nirodana ary velona ny sasany amin'izy ireo ary miantso vonjy amin'ny alalan'ny findain'izy ireo.
Nanoratra ato ihany koa i El Nadaha ary manontany tena hoe nahoana no mihaodihaody sy mandratra ny olona mahantra hatrany ny loza :
Nandratra ny foko hatrany nandritra ny tontolo andro ny fieritreretana iray rehefa nandre ny vaovao tena mampalahelo sy ny voina mampalahelo momba ny loza voajanahary izay nitranga tany Kairo aho… Nahoana ny lozabe no mihaodihaody hatrany manodidina ny olona mampalahelo? Nahoana ny mahantra no miha-mahantra, miha-marary, very havan-tiana ary mitohy miady amin'ny fiainana mandrakariva?
Raha vao maika lasa miha-matavy, miha-noana ary lozabe kokoa ny amboadia Be Ratsy Fanahy izay mihinana ny firenentsika?
Tsy manda ny anjara aho satria fantatro izany fa “Qadaa Allah Wa Qadaroh” (sitrapon'Andriamanitra)
Malahelo fotsiny aho fa ilay tanàna kely eo amin'ny manodidina izay misy ireo mponina tena mahantra sy mila fanampiana ary nisafidy ny hanangana trano kely vita tamin'ny biriky potipotika miaraka amin'ny tafo poti-by dia tsy maintsy nizaka ny fianjeran'ny Vatobe avy amin'ny Havoana….. Azoko an-tsaina izy ireo eo am-pisakafoanana … eo am-patoriana na inona ny nataony raha nianjera ireo Vatobe ireo nanapotika ireo trano kely mahantra teo an-dohan”izy ireo … Maro ny maty sy ny naratra… mbola niampy indray ny voina mampalahelo nitranga tao Aldwe2a … izay tanàna efa fadiranovana!
Namela ity fanehoan-kevitra manaraka ity ihany koa i Mohamed El Gohary tao amin'ny lahatsoratr'i El Nadaha:
Vokatry ny nataon'olombelona izany matetika. Nitaraina ireo olona tao nandritra ny taona maro mikasika ny fivoahan'ny rano, satria vatosokay ny ankabeazan'io faritra io, ary miova ny vatosokay rehefa tratran'ny rano araka ny fantatsika. Maro ireo fanapahan-kevitra navoaka tanatin'ny 5 taona mba hiatrehana ity toe-javatra ity kanefa tsy nisy na inona na inona natao.
Ary farany, nanoratra momba ny loza i Abdul Rahman tao amin'ny bilaoginy, ary niantso izany ho: “Ilay vatolampy namono tena.”